Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay weerarada ka dhaca Muqdisho (Daawo) – Radio Daljir
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay weerarada ka dhaca Muqdisho (Daawo)
Abriil 5, 2019 5:03 g 0
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa markale ku celiyay in ay socdaan howlgalo ka dhan ah Al-Shabaab, isagoo ka codsaday shacabka in ay u adkeystaan dhibaatooyinka ka dhasha howlgalada ay ciidamada dowladdu sameynayaan.
Madaxweyne Farmaajo oo maanta ka hadlayay masjidka ku yaal Madaxtooyada Salaada Jimce kadib ayaa sheegay in dowladiisu ay dooneyso in ay dowladaha ka dambeeya aysan ku mashquulin arrimaha amniga oo ay ku mashquulaan horumarka.
“Dowladihii iga horeeyay dadaal weyn ayay ku bixiyeen inay ka shaqeeyaan amniga annigana waxaan doonayaa in dowlada iga dambeyso ay xilka la wareegto dalka oo nabad ah.”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku macneeyay sababaha marwalba ay Al-Shabaab weerarada uga geystaan Muqdisho inay tahay in la yiraahdo dowlad kama jirto Soomaaliya.
Maraykanka oo diiday in la baaro dambiyada ay ciidamadiisu ka galeen Afganistan